Apple inoburitsa beta 1 shanduro dzeIOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 uye tvOS 15.1 | IPhone nhau
Pasina zororo, kambani yeCupertino ichangobva kuburitsa beta 1 vhezheni dzeIOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 uye tvOS 15.1 yevanogadzira. Mune ino kesi, iyo nyowani vhezheni iyo inowedzera bug kugadzirisa uye mhinduro kune mamwe akaonekwa mabugs, zvakare wedzera iro basa reShareplay seyakanyanya kutsva.
Idzi nyowani beta vhezheni dzeApple zvishandiso uye iyo Apple Watch inofambidzana neiyo beta vhezheni 7 yeMacOS Monterey, iyo yatinoyeuka ichiri kuwanikwa kune vashandisi. Chokwadi iyo yekupedzisira vhezheni yeMac inoshanda sisitimu haitore nguva yakareba kuti itange, asi panguva ino haisati yavapo.
Anogadzira Betas rimwe zuva mushure mekuburitswa kwekupedzisira
Iko hakuna zororo mune ino pfungwa uye kana zvakaoma Maawa makumi maviri nemana apfuura kubva pakauya iOS 24 yevashandisi vese mune yayo yepamutemo vhezheni uye isu tatova neiyo nyowani beta vhezheni yeiyo iPhone inoshanda sisitimu mumaoko evanogadzira. Izvo zvinouyawo nemamwe ese maBhaibheri anowanikwa saka masikati apera.
Dambudziko harisi rekubeta beta reiyo iPhone, iPad, Apple Watch kana Apple TV, "dambudziko" rinoita kunge riri mune Mac vhezheni kuti mushure memavhiki matatu kubva pa beta 6 yechinomwe inosvika uye zvinoita sekunge iri RC (Regedza Musarudzo) saka tichafanirwa kumirira kuti tione zvinoitika neshanduro yekupedzisira yeiyi. Chero zvazvingaitika, kana uine dambudziko, zvirinani kuti usarivhure.
Rangarira kuti idzi beta shanduro dzevagadziri vanogona kunge vasina kugadzikana kana kusaenderana nechinhu chero chishandiso / chishandiso chaunoshandisa pane chako chishandiso saka senguva dzose tinokurudzira kuti iwe uchenjere uye rega zvirinyore vhezheni dzeruzhinji dzeizvi dzisvike kuzviisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Apple inoburitsa beta 1 shanduro dzeIOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 uye tvOS 15.1